बि.आर.एन.ब्रदर्सले गर्याे सुजुकीको एस–प्रेसो को सर्वजनिक, यस्ता छन् सुबिधाहरू – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
November 17, 2019 November 17, 2019 सरोकार संवाददाता
दमक, मंसीर १, झापाको दमक स्थित सुजुकी कारको बिक्रेता बि.आर.एन.ब्रदर्सलेसुजुकीको एस–प्रेसो कारको सर्वजनिक गरेको छ ।
आज एक कार्यक्रम गरी सुजुकी कम्पनीको ‘एस–प्रेसो’, ‘माई फस्र्ट एसयुभी’ सार्वजनिक गरेको छ । आजैबाटनै नेपाल अधिराज्यभरका ३६ वटा सुजुकी रिटेल नेटवर्क मार्फत सुजुकीको एस–प्रेसो कारको लन्च गरिएको बि.आर.एन. ब्रर्दशका संचालक संजु पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
पराजुलीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा दमक उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोकूल श्रेष्ठ रहनु भएको थियो । सोही अवसरमा दमक वाणिज्य संघका सम्पुर्ण नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु लाई बि.आर.एन. ब्रदर्शका तर्फ बाट खदा ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रमको अतिथि पाथीभरा एफ. एम.का प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र चौलागाँई , पुर्वसन्देश दैनिकका गञ्ज बहादुर दाहाल लगायत बिभिन्न संचारमाध्यमका पत्रकार, संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा ग्राहकहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा वाणिज्य संघका तर्फ बाट अध्यक्ष श्रेष्ठ र ग्राहकका तर्फ बाट देबकुमार नेम्बाङले मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
कारको बारेमा बि.आर.एन. ब्रर्दशका सेल्स एक्ज्युकेटिभ बिरेन्द्र प्रसाईले जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाले लन्च गरिएको कारमा १० वटा भन्दा बढी सेफ्टि फिचरहरु रहेको तथा नेपालको भौगोलीक बनावट सुहाँउदो कार रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । दमदार एक्सटेरियर , युनिक र युथफुल ईन्टेरियर, रोमाञ्चक यात्राको लागि नयाँ टेक्नोलोजी, बेजोड सेफ्टि सिस्टम जस्ता बिशेषता रहेको यस कारको भीएक्सआई प्लस मुल्य २५ लाख ४९ हजार रहेको छ भने स्ट्यान्डार्ड काे मुल्य २२ लाख ९९हजार रहेकाे छ । कार्यक्रमकै अवसरमा बक्सीङका पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाल सरकारका बक्सिङ प्रशिक्षक दिपक राईले एस–प्रेसो कार खरिद गर्नुभएको थियो । राई लाई वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ तथा बि.आर.एन.ब्रदर्सका संचालक पराजुलीले चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
अर्थ/बजार, प्रदेश न एक
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नेपाल सरकारलाई...